Habab Aad Subaxda Hore Firfircooni Ku Heli Karto Adiga Oo Aan U Baahan Bun Aad Caajiska Hurdada Ku Duuliso – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Habab Aad Subaxda Hore Firfircooni Ku Heli Karto Adiga Oo Aan U...
Habab Aad Subaxda Hore Firfircooni Ku Heli Karto Adiga Oo Aan U Baahan Bun Aad Caajiska Hurdada Ku Duuliso
Qof kasta oo subaxda hore toosaa waxa uu inta badan dareemaa in uu u baahan yahay firfircooni dheeraad ah iyo in uu jidhka ku furfuro si caajiskii hurdadu uga wada kaco, waana sababta ugu badan ee ay dadku subaxda hore u cabbaan bunka. Laakiin dhibaatada jirta ayaa ah in dad badani aanay xiisayn cabbista bunka oo ay haddana dareensan yihiini n ay u baahan yihiin, ama in aanay cabbi karin sababo caafimaadkooda la xidhiidha awgeed. Qormadan oo uu Geeska Afrika ka soo xigtay shabakadda Al-carabiya waxa ay soo gudbinaysaa dhowr arrimood oo qofku haddii uu subaxda hore sameeyo uu kaga maarmayo bunka.
1. Biyaha qabow: Haddii isla marka uu qofku aroortii hurdada ka kaco uu cabbo koob biyo qabow ah, waxa ay ka caawinaysaa in ay firfircooni iyo dib u cusboonaysiin geliso unugyada maskaxda, taas o qofka ku beeraysa shucuur firfircooni oo maalinta oo dhan aan ka hadhin.
Sidoo kale waxa ay khubarada caafimaadku sheegayaan in qofka oo biyo qabow ku maydha subaxda hore ay ku abuurto firfircooni dheeraad ah. (Waa biyuhu marka uu heer-kul-koodi caadiga yahay ee aan la kululayn)
2. Jimicis fudud: Hababka ugu wanaagsan ee jidhku ku heli karo firfircooni maalinta oo dhan ah waxaa ka mid ah in qofku uu subaxda hore sameeyo jimicsi fudud, si ay u furfurmaan muruqyadu. Jimicsiga fudud ee aroorta hore waxa uu si weyn u wanaajiyaa habka wareegga dhiigga, taas oo keenaysa firfircooni jidhka gasha.
Sidoo kale waxaa muhiim ah in haddii qofku uu leeyahay jadwal jimicsi oo maalinle ah, in uu ku dadaalo in saacadaha jimicsiga uu samaynayaa ay noqdaan aroorta hore, waayo jimicsigu waxa uu dardar geliyaa korodhka hormoonka Endorphin ee jidhka ku jira oo ah hormoonka masuulka ka ah wanaajinta dabeecaddaqofka, kuna abuura firfircooni iyo xasilooni nafsi ah.
3. Barootiinta: Cuntooyinka barootiinta leh ee uu ka mid yahay beedka iyo caanaha oo lagu quraacdaa waxa ay caawiyaan in ay firfircoonaadaan unugyada maskaxdu, taasina ay qofka geliso firfircooni dheeraad ah.
4. Karboo-haydarayt (Carbohydrate): Cuntooyinka kaarboo-haydarayda leh, sida boorashka iyo khubuska oo lagu quraacdaa waxa ay qofka gelisaa tamar degdeg ah iyo shucuur firfircooni ah.
5. Shaaha cagaaran: Koob shaah cagaaran ah oo uu qofku subaxda hore cabbaa waa beddel caafimaad qaba oo uu iskaga deyn karo bunka. Shaaha cagaaran ayaa ay khubaradu sheegeen in uu u fiican yahay caafimaadka jidhka, miisaankana dhimo, sidoo kalana uu kaalinta bunka geli karo oo jidhka uu firfircooni geliyo.
Previous articleQaraxyo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Next articleDEG DEG:-Dil Goordhow Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
ku Dadaal faytamiin Cga si aad uga hor Tagtid cuduro badan
𝗦𝗢𝗖𝗢𝗗𝗦𝗜𝗜 𝗖𝗔𝗟𝗢𝗢𝗦𝗛𝗔𝗔𝗗𝗔 𝗔𝗗𝗜𝗚𝗔 𝗢𝗢 𝗚𝗨𝗥𝗜𝗚𝗔𝗔𝗗𝗔 𝗝𝗢𝗢𝗚𝗔